Yintoni ukuThengiswa kwezeMpilo? | Martech Zone
Xa ungene kwingozi yemoto, uwa phantsi okanye wafumana olunye uhlobo lokulimala kakhulu, into yokugqibela osenokucinga ngayo leliphi igumbi likaxakeka ofuna ukulindwendwela ngokusekwe kwintengiso yokugqibela, kwibhodi yezaziso okanye kwileta ye-imeyile oyibonileyo. . Ifanele yokuthengisa ayisebenzi ngexesha likaxakeka.
Nangona kunjalo, ukuthengisa kukhathalelo lwempilo kungaphezulu kokuthengisa amasebe kaxakeka kunye neeyunithi zononophelo olunzulu. Izibhedlele, iiklinikhi zokhathalelo olungxamisekileyo, kunye namaziko empilo anoxanduva lokukhuthaza uluhlu olubanzi lweenkonzo ezibonisa imephu kwintengiso.
Ngelixa ukuthengisa ngononophelo lwempilo kufana nezinye iintlobo zemveli zentengiso, masiqwalasele ezinye zezinto ezizodwa zentengiso kolu shishino:
Imicimbi yoLuntu kunye neNkqubo
Idatha entsha Inkonzo yabatyali beMoody ibonisa ukwehla okukhulu ekusebenzeni kwemali esibhedlele. Iingxelo zikaMoody zehla ukusuka kwi-9.5 yeepesenti ngo-2016 ukuya kwi-8.1 yeepesenti ngo-2017-ukwehla okungazange kubonwe okokugqibela okwagqibela ukubonwa ngexesha lobunzima bezezimali ngo-2008. Amanani afana nala awahlali kakuhle kuzinzo lwexesha elide kwezemali, yiyo loo nto abaphathi abaninzi besibhedlele befuna eminye imithombo yengeniso.
Ezinye izibhedlele ngoku zingenisa imali kwiinkqubo zempilo kunye neziganeko ezizodwa kumzamo woku ilahleko kwamanye amasebe. Iinkqubo zempilo-ntle azincedi kuphela ukuthintela ukwenzakala kunye nokugula, kodwa ngokwe-Medical Fitness Association, zikwakhona ukufezekisa imida yegalelo 30 ekhulwini. Iminyhadala ekhethekileyo inokuba yimithombo ebalulekileyo yengeniso ngokunjalo. Ngo-2017 kuphela, iZibhedlele zaBantwana zeMimangaliso yeNethiwekhi iphakamise ngaphezulu kweedola ezingama-38 ezigidi Ngonxibelelwano loMdaniso weMarathon yonyaka.
Njengalo naliphi na ishishini, udumo lubalulekile ekutsaleni kungekuphela nje kwizigulana kodwa nakwitalente ekumgangatho ophezulu. Iindawo zokuphonononga abathengi, ezinjengeYelp, zafumana ukuthandwa phakathi kwiminyaka yoo-2000 kwaye ngoku zinomtsalane izigidi zabasebenzisi yonke imihla. Ezempilo, iwebhusayithi ekhokelayo yokujonga ukhathalelo lwempilo, ibikho ngaphezulu kweminyaka engama-20 inceda izigulana zifumane ababoneleli abakumgangatho ophezulu kunye nezibhedlele.
Ngokukhanya koMthetho woKhathalelo ongenakufikeleleka onika abaguli ulawulo ngakumbi kumnikezeli wabo wokukhetha, uxanduva lwabathengisi bokhathalelo lwempilo lokuthengisa uphawu lwabo lukhule kakhulu. Enye indlela ekhawulezayo yokuthengisa kukhathalelo lwempilo inokubeka ingxelo kwizigulana ekusebenziseni kakuhle ukusebenzisa amandla Isoftware yokulawula igama Ukuchonga iintsilelo zenethiwekhi. Oku kwenza ukuba kube lula ukulungisa izikhalazo ngokukhawuleza, ngelixa kusonyusa ukuvezwa kwezimvo ezilungileyo ezivela kwizigulana. Ukuba uphononongo olubi luyinto exhalabisayo, sebenzisa amandla esaveyi sokwaneliseka kwesigulana ukuchonga imiba kwangoko, ngaphambi kokuba bayenze kwiindawo ezijolise kuluntu ezinje ngeeMpilo.
Itekhnoloji yoKhathalelo lwezeMpilo yakutshanje
Siyazi ukuba abathengi banqwenela itekhnoloji yakutshanje. Oku kunokuba yinyani ngakumbi xa kuziwa kukhathalelo lwempilo. Abathengi banokulunga ngokuba ne-iPhone ezizukulwana ezimbalwa ezindala ezinesikrini esiqhekekileyo, kodwa abayi kuvuya ukuba i-scan yabo yengqondo yenziwa kwiskena se-MRI kwimo efanayo.
Ekuphenduleni, abathengisi bezempilo babeke izinto zabo kwintengiso yezobuchwephesha njengendlela yokudala umahluko kwintengiso.
Kusenokwenzeka ukuba siqhubeke nokubona ezinye iirobhothi ezincediswa ziirobhothi kunye neenkqubo ezongeziweyo ze-AI kule minyaka izayo. Umzekelo, isifundo olwenziwe yiStanford University School of Medicine lubone ukonyuka koqhaqho lwezintso oluncediswa ziirobhothi ukusuka kwiipesenti eziyi-1.5 ezenziwa ngo-2003 ukuya kwipesenti ezingama-27 ngowama-2015.
Njengoko ibango lenkqubela phambili yetekhnoloji inyuka, abathengisi bezempilo basebenza ngokusondeleyo kunye neentloko zesebe ukuchonga umahluko omtsha kunye nemiyalezo ephambili rhoqo ngenyanga nonyaka.
Nakuba kwezentengiso Iyafana neendlela zesiko zentengiso, izisa umbono wayo owahlukileyo kwitafile. Ngokusebenzisa iinkqubo kunye nemisitho, kugxilwe kulawulo lwegama kunye nokukhanyisa kubuchwephesha bamva nje, ukuthengisa kukhathalelo lwempilo kuyakha ngempumelelo ulwazi malunga neenkonzo ezininzi.
tags: kwezentengisoezempilo twitterezempilo kwintengiso ye-twitterzempilourhweboulawulo lwegamaReviewsYintoni intengiso yezempilo